बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिनु राष्ट्रिय भावनामा ठेस : डा. भट्टराई (विज्ञप्तिको पूर्णपाठसहित) - Ratopati
काठमाडौं, जेठ २५ – राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भटटराईले सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएर राष्ट्रिय भावनामा ठेस पुर्याएको बताएका छन् । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी डा. भटराइले राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई सरकारले विनाप्रतिश्पर्धा सो कम्पनिलाई दिएर नेपालीहरुको आफै बिकास गर्ने चाहानामाथि कुठाराघात गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । डा भटराईले सरकारको सो प्रकृयालाई गलत प्रक्रिया र गलत नजीर भन्दै उक्त समझदारीले दूरगामी असर पर्ने प्रश्ट पारेका छन् ।
यस्तो छ डा भटराईले बुढीगण्डकीबारे जारी गरेको विज्ञप्तिको पुर्णपाठ ः